Uku ndiko kuvandudzwa kushanu kunounzwa VLC 5 kune vashandisi veGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Takatanga 2018 neshanduro nyowani yeVLC: VLC 3.0, mutambi wemultimedia unounza kuvandudzwa kukuru pamusoro peshanduro dzakapfuura uye neruremekedzo kune vamwe vaGnu / Linux vhidhiyo vatambi. VLC 3.0 pamwe vazhinji venyu vatove nayo mune dzenyu dzekugovera, asi kwete ese mabhenefiti eiyi vhezheni anowanikwa kana anoziva vashandisi vayo.
Ndiko kusaka tafunga kuverenga iyo 5 yakanaka kwazvo nhau iyo yatichawana muVLC 3.0 uye izvo zvatinogona kushandisa kubva panguva yekutanga.
1 Chromecast kuenderana
2 LTS vhezheni
3 Network scan
4 4K Kutamba
5 Inogadzirisa yekumhanyisa rutsigiro
VLC 3.0 inosangana uye inoshanda neGoogle Chromecast. Ichi chishandiso cheGoogle chinoto shanda neVLC uye zvinoreva kuti vashandisi vanogona kutumira mavhidhiyo kuchinhu ichi vasina kusiya Gnu / Linux kana kushandisa iyo kutevedzera kana Google web browser. Kuti ushandise basa iri, isu tichimhanya vhidhiyo yatinoenda Kutamba -> Render uye sarudza mudziyo weGoogle Chromecast watinoda kutumira zvemultimedia.
Mazhinji Mahara Software mapurogiramu uye mashandiro ari kugadzira LTS shanduro, Yakareba Tsigiro vhezheni izvo chiratidzo chemhando yevakawanda vagadziri. VLC 3.0 richava bazi reLTS rinozotsigirwa kusvika mushure mekunge shanduro dzinotevera dzaburitswaAya maVLC 4 uye VLC 5. Zvisinei, izvi zvidzoreso hazvizove neshanduko dzakanyanya asi shanduko dzine chekuita nekuchengeteka uye zviputi zvakawanikwa.
Kuburikidza nemapulagi uye hacks, vashandisi vevashanduri vekare ve VLC inogona kuongorora mafaira enhau kubva kure kure komputa kana server. Iye zvino, iyi sarudzo inouya nekumira muVLC 3.0 uye vashandisi vanogona kutsvaga nekutsvaga mafaera e multimedia kuburikidza neakasiyana maratidziro enetiweki aripo uye anogara kubva kuVLC.
VLC yakagara ichitsigira OpenGL maraibhurari asi haina kuishandisa nekukanganisa, chimwe chinhu chakachinja neshanduro nyowani, nekudaro uchibvumira zvemukati kutamba pa4K 60fps, tsananguro yepamusoro yezvinhu zvinogona kungowanikwa kubva kumasystem ekushandira.
Inogadzirisa yekumhanyisa rutsigiro
Iwo ma download mamaneja ewebhu mabhurawuza anoenderana neyekumhanyisa kumhanyisa pamwe nekutora muzvikamu zvinobvumidza kuenderera nekutora kweiyo faira. Iyi tekinoroji yakaitwa muVLC 3.0 inotibvumidza ramba uchitamba kuburikidza nekutenderera kunyangwe kurodha pasi kuri kudimburwa.
Tichifunga nezve izvi zvishanu kugadzirisa, tinogona kuzvitaura VLC 3.0 yatora yakakurisa yemhando yepamusoro, ichibvumira kuvandudzwa kwakakumbirwa nevashandisi kwenguva yakareba uye izvo zvave kuwanikwa, asi Kugoverwa kwese kune iyo vhezheni iyi yeVLC here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Uku ndiko kuvandudzwa kushanu kunounzwa neVnu Gnu / Linux vashandisi